Tụkchara nkọwa zuru ezu na nhazi nke Meizu 16Xs | Gam akporosis
Nzacha nkọwa zuru ezu na imewe nke Meizu 16Xs
Naanị awa ole na ole gara aga ka anyị gosiri gị foto abụọ weghaara na Meizu 16Xs. Otu n'ime ha jidere site na ihe mmetụta ya bụ isi, ebe onye nke ọzọ nọ na ya ihe mmetụta ultra-wide-angle.
Ọ bụ ezie na n'oge ahụ anyị enweghị ọtụtụ ozi gbasara nkọwapụta ya na njirimara ya, ugbu a anyị nwere ihe ọmụma banyere ha, anyị ga-akọkwa ha n'okpuru.
Meizu 16Xs Leaked nkọwapụta na atụmatụ
Meizu 16Xs na-ekwe nkwa ịbụ onye dị n'etiti usoro ọmụmụdị ka ọ na-akwado otu n'ime ndị kacha ọhụrụ nhazi Qualcomm, ndị Snapdragon 675. Chipset a, dabere na ozi anakọtara site na DealnTech, jikọtara ya site na ikike 6 GB RAM na ohere nchekwa 64 ma ọ bụ 128 GB.
Ihuenyo ọ na-akwadebe abụghị ihe na-adọrọ mmasị. Nke a, dị ka ebe siri ike, bụ 6.2 inch diagonal AMOLED na FullHD + mkpebi nke 2,232 x 1,080 pikselụ (18.6: 9) nke nwere oghere oghere n'ihu 90.29%. Dị ka onye bu ya ụzọ, panel na-eji teknụzụ Super mTouch Meizu eme ihe ma mepee naanị 0.2 sekọnd. O nwekwara nkwado maka ịkwụ ụgwọ AliPay na WeChat.
Meizu 16Xs ga-abụ igwe igwefoto atọ nke mbụ sitere n'aka ndị na-emepụta ekwentị China. Isi ihe mmetụta bụ 48 MP (f / 1.7) igwefoto nwere oghere omenala 6P. Ejiri 5 MP (f / 1.9) na igwefoto 8 MP (f / 2.2). Otu igwefoto nke abụọ bụ igwefoto buru ibu buru ibu nke 118.8 Celsius maka ịde foto buru ibu. Cameradị igwefoto ndị ọzọ edepụtara bụ ọnọdụ eserese na ọnọdụ ọnọdụ abalị dị egwu.
Ekwentị mkpanaka agaghị enwe ọkwa ma ọ bụ igwefoto selfie dị ka ọtụtụ n'ime ndị asọmpi ya. Kama, a 16MP (f / 2.2) igwefoto ga-dabara na a pụtara ebughibu etiti. Igwefoto nwere oghere 5P omenala, HDR +, ọnọdụ mma AI, ọnọdụ eserese, na nkwado maka ịmeghe ihu.
Render nke Meizu 16Xs leaked na Weibo
N'okpuru plastic ahu nke ngwaọrụ bu a 4,000 mAh batrị. Meizu enwewo ike idobe ịdị arọ nke ekwentị ahụ na gram 165, na-eme ka ọ dị mfe karịa ọtụtụ ndị na-agba ya. Ekwentị ahụ nwere 152 x 74.4 x 8.3 millimeters ma ọ ga-adị na agba agba atọ: Knight Black, Atlantis, Coral Orange, na Ice Silk White.
Mbido ya dị ihe na-erughị otu ụbọchị. Ka ọ dị ugbu a, anyị nwere ike ịghọta maka ntụgharị n'elu nke ahụ kọwara ama dị na oroma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nzacha nkọwa zuru ezu na imewe nke Meizu 16Xs
Samsung Galaxy Watch na-esote ga-enwe njikọ 5G